Ngo izindaba ekuqaleni kwekhulu le-19 uvame ukubizwa ezitjhelelako. Ngaleso sikhathi leli gama kwakuvamile kakhulu, kodwa manje akuyona ngisho zonke omdala uzokwazi ukusho ngokuqiniseka ukuthi iyini. Futhi izingane zanamuhla nakakhulu.
Ngo izindaba iningi, slide - isihlibhi sokhuni esincane lapho izingane kukhona fun kangaka lowaya ngehla entabeni. Ngokuvamile le isihlibhi akazange ababukele njengoba isihlibhi yesimanje. Indawo lapho-ke kwakudingekile ukuba zihlale phansi lwaluvela luphelele futhi ivaliwe. Lokho, izingane musa ukuhlala endaweni enhle livundle kubo, njengoba manje, okungukuthi ngaphakathi, kokuba ivalwe nxazonke ngumuntu abarimi, nakuba ongaphakeme.
Isihlibhi - kungcono ngokuyikho okuyingxenye yomlando wethu ngisho isiko, ngoba kuphela enziwa ngesandla, kodwa futhi ngesineke. Yiqiniso, eziningi zalezi amathoyizi abasele unpainted, kodwa kwakukhona amakhosi enjalo ubani ngesineke lezi sleds ngaphansi Khokhlov, usebenzisa Boretskaya Horodetsky ubuchwepheshe - ngamanye amazwi, njengoba Bekulokhu kuyisiko endaweni ethile.
Isikhathi esining impela ogogo nomkhulu sleds ngaphakathi ukuxoxa izikhumba noma indwangu, elalihlotshiswe ngaphandle futhi Asizisoli ngendwangu, futhi ngezinye izikhathi ezinye imihlobiso ezifana ubuhlalu noma efekethisiwe. Yiqiniso, izimoto ezifana ayenamandla okukwenza hhayi abalimi. Iyatholakala sleds ezinjalo zaba abantwana kuphela abathengisi ocebile nabakhulu. Ngakho, i-slide - akusiyo nje izindlela zokuhamba eqhweni neqhwa, kodwa futhi ngezinga elithile isimo sengane.
Kusukela igama lalo imoto kwamiswa futhi Ngamanye amazwi: ukuze master wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza nezibhulo, ngokuthi salazochnik. Shelelisela phezu eqhweni, iqhwa nakatannomu - "salazit".
Ngaphezu kwalokho, sasinobaba abanye abagijimi ensimini umsebenzi ensimini - uhlobo Ripper ezweni ngemva sokuhlwanyela, Welukwa izinti ngesimo umshanelo.
I isihlibhi manje
Okudidayo ukuthi, izimfashini kwalolu hlobo isihlibhi ebuyiselwa. Manje slayida - nesihlibhi avaliwe lokhuni wenza namanje ngesandla. Nina makhosi, qhubekani zilungele ukwenza ithoyizi ebusika ukuba ingane, kancane, kodwa namanje zivela. Nalapha futhi, ungathola elula lokhuni isihlibhi-abagijimi, futhi kungenziwa zaveza futhi kusetshenziswe amasu ahlukene imidwebo noma ehlotshisiwe ngezinye izindlela.
Ukuze uthole ngezandla ezokuthutha enjalo, ungathola onguchwepheshe edolobheni lakho ngibenze oda. Ezimakethe khulula they cishe ziphinde zenzeke.
Kuyathakazelisa ukuthi kusenabantu lobuchwepheshe kanye umbukiso ayisishiyagalolunye amalunga ngokhuni ukwakha Tenon futhi kusilungisi amadivayisi ezihluthulelwe isiyingi. Lezi ezincwadini ezine (tenoning ithuluzi, iyunithi stop, umbusi ukukala, stop adjustable) efakwe etafuleni ngezinhlamvu ezihlelwa ngesandla.
Chair ihlanganisa: ifenisha siguqule
Izibulali-magciwane ekhaya: yini ukukhetha?
Abantu encane kunazo zonke emhlabeni - ziyini ..?
Izikhangibavakashi e eYekaterinburg kubantu abasha futhi wonke umndeni
Dream Ukuhunyushwa: yini uyaphupha ushukela
Izinsalela Siluana Afonskogo Bryansk e ukugubha iminyaka engu-1000th phambi monasticism Russian eNtabeni Athos